Wararka - Noocyada aluminium ee sida gaarka ah loo sameeyay waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo khatar badan
1. Dhab ahaan miyay tahay in la habeeyo?
Haddii aad rabto inaad u habeysid astaanta aluminium ee qaabka dibadda ee qalabka, waxaa lagugula talinayaa inaadan habeynin, sababtoo ah astaanta aluminium ee warshadaha caadiga ah waa qaab tayo sare leh oo aluminium ah, waxaana jira qeexitaanno badan, waxay la kulmi karaan dhammaan baahiyaha ee qaabka. Iyo qalab kala duwan oo dhameystiran, noocyo kaladuwan oo xulashooyin xiriir ah oo aad adigu dooran karto. Dadka qaarkiis waxay dhihi karaan jirkeyga kore ma ahan afargeesle laakiin waa geesoolayaal, halka qeybta guud ee aluminiumka warshadaha ay tahay afargeesle ama afargeesle. Waxaan si xilkasnimo ah u dhihi karaa taasi sidoo kale dhib maahan, ilaa iyo inta khadka xariiqa, majiro isku imaatin cadaadis, aluminiumkeena hoolka bandhigyada octagonal waxaa lagu dhisay astaamaha aluminium warshadaha.
2. Aluminium ka sii dhumuc weyn, ayaa ka sii fiican?
Haddii ay tahay inaad qaabeeysid astaanta, ma ahan wax qaali ah inaad astaamiso. Qiimaha furitaanka dhimashada ee aluminium-yada aluminiumku runtii waa jaban yahay marka la barbar dhigo wasakhaha kale. Qaar ka mid ah astaamaha aluminium ee caadiga ah waxay u baahan yihiin inay door gaar ah ciyaaraan, marka marka naqshadeynta naqshadeynta sawirku ay si gaar ah u qaro weyn tahay, si loo gaaro awoodda xamuul qaadista weyn. Laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo dhumucda gidaarku ma aha mid sii dhumuc weyn, dhinaca kale, qiimaha dhumucda darbigu wuu ka sii sarreeyaa, qiimaha aluminiumku laftiisu aad buu u sarreeyaa, kaas oo si weyn u kordhiya kharashka; Dhinaca kale, gidaarka ka sii dhumuc weyn ayaa ka hooseeya adkaanta. Sida aaladda 6063 aluminium ee aan inta badan sameyno, heerka adkeysigu waa 8-12HW. Haddii dhumucda derbigu aad u qaro weyn tahay, adkeysigu wuxuu gaari karaa oo keliya 8HW. Tusaale ahaan, dhumucda derbiga ee muuqaalkeenna caadiga ah ee aluminium warshaddu waa 2mm oo keliya, laakiin qaabkeedu waa mid aad u macquul ah, kaas oo buuxin kara shuruudaha qaadista culeyska sare.
3. Ma isu geyn kartaa labada muuqaal hal mid?
Macaamiisha qaar waxay rabaan inay keydiyaan qaar ka mid ah kharashka caaryada ama waxay leeyihiin fikrado kale, waxaa jira noocyo badan oo qaabab aluminium ah oo loo habeeyay, waxay u baahan yihiin inay isticmaalaan isku dhafnaan badan oo aluminium ah, nashqadeeyayaasha shirkadda macaamiisha ayaa isku dari doona labada caaryo ee caaryada, u maleynaya inay taasi badbaadin karto waxyaabo badan. Dhab ahaantii, waxaan dhihi lahaa waxay dib u dhigeysaa waxyaabaha. Waxaan mar yeelanay macmiil u shaqeeya sidan. Waxay ahayd inaanu furno laba nooc oo wasakheysan, mid derbi aad u khafiif ah leh iyo mid derbi aad u qaro weyn leh. Markii dambe, waxaan beddelay sawirka naqshadeynta oo aan ku milmay labada caaryadoodii, taasoo keentay in ku dhowaad la moodo in la xoqay. Waxaan isku dayay inaan beddelo wasakhda oo waxaan beddelay caaryada. Waqtiyada N ee tijaabada kadib, wasakhda ayaa uqalantay. Sababtoo ah dhumucda darbiga ayaa aad u ballaaran, way adag tahay in la soo saaro.
4. Ayaa iska leh qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka aluminium ee qaabaysan?
Noocyada aluminium ee loo yaqaan 'Custom-made aluminium' waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo, khidmadda furitaanka caaryada waxaa badanaa bixiya macaamilka (waa la soo celin karaa haddii mugga iibsiga sanadlaha ahi gaaro caddad gaara). Markaa lahaanshaha caaryada waa inay noqotaa macaamil, tani shaki kuma jiro. Laakiin caaryada guud ahaan macaamiisha kama qaadaan, laakiin waxaa lagu hayaa soo saaraha. Maaddaama astaamaha aluminium ee loo habeeyay si dhif ah loo dalbado hal mar, wax yar baa loo isticmaalaa macaamiisha u qaadaya guriga. Soo-saaruhu wuxuu leeyahay bakhaar gaar ah oo caaryada lagu kaydiyo caaryada, caaryadu waa tayada birta H13, ma fududa in wax la yeelo. Sababo gaar ah awgood, macaamiisha qaarkood waxay jeclaan lahaayeen inay dib u celiyaan caaryada oo ay u beddelaan warshad kale oo wax soo saar ah. Waxaan kugula talin lahaa inaad isku daydo inaadan sidan sameyn oo aad go'aansato halka aad rabto inaad sameyso ka hor intaadan furin caaryada. Sababtoo ah soosaarayaasha waxsoosaarka aluminium kasta isku mid maahan, suufka dhinta, qeexida daboolida dhimashadu sidoo kale way ka duwan yihiin Waxaan la kulanay macaamiil badan oo raba inay wasakhdahooda u qaataan warshadeena wax soo saar, laakiin si xushmad leh ayaan u diidnay.
Waxa kor ku xusan waa waxa aan doonayo inaan soo bandhigo, waxaan rajeynayaa inay ku caawin karto.